तिहारमा मैले टिका लगाइदिने सबै परिवारकै दाजुभाई जस्तो लाग्छः अञ्जली मास्के (भिडियोसहित) - TV Annapurna
२० वर्षदेखि दिदीबहिनी नभएका दाजुभाइलाई सामूहिक भाइटिका लगाइँदै आएकी अञ्जली मास्के धर्मकर्ममा विश्वास गर्छिन् । सानै उमेर देखि मानव सेवा तथा धर्ममा आस्था राख्ने मास्के आफ्नो भन्दा अरुकोबारे बढी सोच्ने गर्छिन् । यही ऊर्जा र निस्वार्थ भावनाले हजारौँ दाजुभाइकी प्यारी दिदी वा बहिनीको रूपमा उनलाई धेरैले चिन्छन् । उनका आफ्नै माइती नभएका भने होइनन् । तर चेली नभएका दाजुभाइको निधार खाली नहोस् भनेर सामूहिक भाइटिका लगाउन सुरुवात गरेको उनी बताउँछिन् । नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चार्ड तिहार नजिकिँदै गर्दा यसै विषयमा केन्द्रित रहेर टिभी अन्नपूर्णकर्मी तुल्सी अर्यालले सबैकी दिदी अञ्जली मास्केसँग कुराकानी गरेकी छिन् । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीः
तिहारको तयारी कसरी गरिरहनु भएको छ ?
सामाग्रीहरू जुटाउँदै छु । लक्ष्मीपूजा सम्म सबै तयारी सक्ने गरी काम गरिरहेकी छु । फलफूलहरू बाँकी छ । अहिले सम्म यही सामान मिलाउन मै व्यस्त छु ।
सामूहिक भाइटिका लगाइदिन तपाइले काष्ठमाण्डप नै किन रोज्नु भयो ?
२०२६ साल देखि मैलै निरन्तर भगवान गोरखनाथको मन्दिरमा पूजा गर्दै आएकी थिए । त्यो ठाउँमा भाइटिका लगाइदिँदा बढी आशिष् मिल्छ भन्ने धार्मिक विश्वासले त्यही ठाउँ रोजेकी हु । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले मन्दिर भत्काए पछि चाहिँ मन्दिरको आसपासमा गर्नु परिरहेको छ । जुन किसिमबाट सहज हुन्छ । त्यसै गरी गर्छु । दाजुभाइको निधार खालि नहोस् भन्ने हेतुले अहिले पनि गर्न लागेकी छु ।
मन्दिर भूकम्पले भत्काएपछि पुनः निर्माण कार्य सम्पन्न भएन । कत्तिको गाह्रो भएको छ ?
गाह्रो त मलाइ जुन दिन भूकम्प गयो त्यही दिन भयो । आफूले त्यतिका वर्ष अघि देखि सधैँ पूजा गर्ने, तिहारको दिन भाइटिका लगाइदिने गरेको मन्दिर अझै यस्तो अवस्थामा देख्दा नरमाइलो लाग्छ । दुख लाग्छ ।
भूकम्पले मन्दिर भत्काउदा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो ?
त्यो बेला म नेपालमा थिइन । छोरा बुहारीसँग बेलायतमा थिए । भूकम्पले काष्ठमाण्डप ढल्यो रे भन्दा त्यहाँ राति भएको थियो । म रातभर सुत्न सकिन । अर्को दिन टिभी खोल्नासाथ समाचारमा देखे । त्यो भत्किएको दृश्य । त्यो दिन घरमा फोन गरे । घरमा सबै ठिक छ भन्ने खबर आयो । काष्ठमाण्डप ढलेको घरमा सबैलाई थाहा रहेछ । तर मलाइ थाहा दिइएन । भोलि पल्ट समाचारबाट थाहा पाए काष्ठमाण्डप पनि ढल्यो भन्ने । त्यो सुन्नासाथ यति रोए । यति कराए मेरो बुवा आमा बित्दा पनि त्यति रोइन होला । एकदमै दुख लागेको थियो । त्यो कुरा भनेरै साध्य छैन । गोरखनाथ बाबा, गोरखनाथ मन्दिर प्रति मलाइ किन हो किन धेरै मोह र आत्मीयता छ ।
बेलायतबाट कहिले फर्किनु भयो ?
एक वर्षको लागि घुम्न गएको थिए । तर काष्ठमाण्डप मन्दिर ढल्यो भनेपछि म त्यहाँ बस्नै सकिन । गएको दुई महिनामै म नेपाल फर्किए ।
काठमाडौँ पुग्नसाथ घर पनि नगई सिधै गोरखनाथ गए वसन्तपुरमा । हनुमाननाथमा राखिएको रहेछ । तर मलाई त्यहाँ जान दिइएन । मैले सबै कुरा भने पछि बल्ल जान दिइयो । अहिले पूजा गर्दे आएकी छु ।
टेलिभिजनबाट देखेको दृश्य र नजिकबाट नियाल्दा के फरक पाउनु भयो भूकम्प पछिको काष्ठमाण्डप ?
टिभीमा देख्दा त्यति अनुमान गरिन । मन्दिर पनि धेरै भत्केको रहेछ । त्यो भत्केको दृश्य देखेपछि आफूले कसरी सम्हाले आफैलाई थाहा छैन । बेलायतमा त ४ दिन सम्म केही नखाई बसेकी थिए । मलाई भगवानसँग मात्रै आस्था होइन । मेरो १७ वर्षको उमेर देखि नै मानवताप्रति आस्था र प्रेम थियो ।
काष्ठमाण्डप भत्किएपछि टिका लगाउन आउने दाजु भाइको सङ्ख्या घट्यो कि बढ्यो ?
पहिले भन्दा कम आउनुहुन्छ होला कि भन्ने लागेको थियो । तर त्यस्तो देखिएन । त्यो वर्ष टिका लगाइदिन अप्ठ्यारो भए पनि टिका लगाउन आउनेको भिड नै थियो ।
भाइटिकामा तपाइले सगुन चाहिँ कति जनाको लागि तयार पार्नु हुन्छ ?
पहिलो पटक भाइटिका लगाइदिँदा चाहिँ १०८ जनाको लागि मात्र तयार पारेको थिए । तर त्यो बेला ६/७ ओटा बाहेक बचेन । सरुवातकै वर्ष त्यति धेरै जना टिका थाप्न आएपछि दोस्रो वर्ष देखि २०८ को तयार पार्न थाले । अहिले ठाउँ अलिकति असजिलो हुँदा यो वर्ष चाहिँ केही कम गर्दै छु ।
आफ्नो परिवारमा को को हुनुहुन्छ ?
मेरो परिवारमा दिदी, बहिनी छौँ । दाजुको केही वर्ष अघि मृत्यु भयो । मेरो आफ्नो दाजु नभए पनि नेपाल तथा विदेशमा दिदी भनेर मसँग तिहारको टिका लगाउन आउने दाजुभाइलाई नै आफ्नै दाजु सम्झेर टिका लगाइदिँदै आएकी छु ।
सामूहिक भाइटिका लगाइदिने सोच सुरुमा कहाँबाट आयो ?
आत्म भित्रबाट नै आएको हो । सेवा, धर्म र प्रेम हो यो । केहिप्रतिको आस्था र प्रेम भएन भने त्यो कुराले निरन्तरता पाउन सक्दैन । मेरो मन देखि नै आएको आस्था हुँदा विगत २० वर्ष देखि निरन्तरता दिँदै आएकी छु । निस्वार्थ गरेको कार्यले निरन्तरता पाउन त्यति सजिलो छैन । मैले धेरै केही गरेको पनि हैन । आफ्नो क्षमताले जति भ्याएको छ । त्यही मात्र गरिरहेको हो ।
समय कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
समय मिलाउन त यति गाह्रो छ । घरमा नुहाई/धुवाइ गरेर, गोरखनाथ बाबालाई मण्डप लेखेर भाइटिका लगाइ दिन्छु । घरमा तयारी भइरहेको हुन्छ । घरमा भाइटिका लगाइदिए पछि १ः३० बजे सम्म अरू मेरा दाजुभाइलाई टिका लगाइदिन जान्छु । साढे ४ सम्म घर फर्कन्छु ।
तपाइले टिका लगाइदिने दाजु भाइहरू तिहारमा मात्रै आउनुहुन्छ वा अरू बेला पनि सम्पर्क हुन्छ ? यो सम्बन्ध तिहारका लागि मात्रै हुन्छ कि अरू बेला पनि हुन्छ ?
अरू बेला पनि भेट्ने र सम्झने धेरै नै हुनुहुन्छ । मैले जसलाई टिका लगाइदिन्छु उहाँहरू मेरो परिवार जस्तै हुनुहुन्छ । सधैँ सँगै बस्ने खाने र कहिले काहि भेट्नेमा फरक त हुन्छ । तर मैले उहाँहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ समान नै छ ।
कहिलेसम्म यसरी टिका लगाइरहनुहुन्छ ?
भगवानको शक्ति बिना मेरो यो कार्यको सुरुवात पनि हुने थिएन । शरीरले साथ दिएसम्म म लगाई रहन्छु । भगवानले कहिलेसम्म गर भनेर आदेश दिनुहुन्छ । म त्यो दिन सम्म यस कार्यलाई निरन्तरता दिने छु । यती दाजुभाइले मलाइ माया दिनु भएको छ । मैले आफ्नो शरीरले सकुन्जेल उहाहरुलाइ छोड्नै मिल्दैन ।
सम्पूर्णमा तिहार तथा छट पर्वको शुभकामना दिन चाहन्छु र मेरा दाजुभाइलाई समयमा टिका लगाउन आउन पनि आग्रह गर्छु ।
उनीसँग गरिएको कुराकानी हेर्न तलको भिडियो हेर्नुहोस् ।
अन्तर्वार्ता, साताका लोकप्रिय समाचार
मङ्सिर १५ गतेभित्र स्थानीय तहको एकीकरण गर्न निर्देशन
पाँच लाखभन्दा बढी मुल्यका ३४ थान मोबाइल सेट बरामद
” काम गर्नका लागी पद नै चाहिन्छ भन्ने होईन । पदमा रहेर वा नहरेर पनि यो...
October 12, 2018 TV-Annapurna 0
नेपाली काँग्रसको कार्यसमिति बैठकले नेपाल विद्यार्थी संघको विधान पारित गरेको छ । विधानमा ३२ वर्षे उमेर...
जनताले प्रचण्ड बहुमतले जिताएको सांसदलाई एकाएक राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? -हो सबैभन्दा पहिला यो...
अन्तर्वार्ता भिडियो समाचार
काँग्रेसमा रोग पस्यो भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने डर होः अर्जुननरसिंह केसी(भिडियो अन्तरवार्ता)
संस्थापन पक्ष महाविशेन अनिश्चित बनाएर नेविसंघलाई आफ्नो कब्जामा लिने उदेश्यले प्रेरित छ । नेपाली काँग्रेसको कार्यसमिति...
संरचनागत आधारबाट प्रहरीमाथि नैतिक प्रश्न उठाएका हौंः रञ्जित तामाङ (भिडियो अन्तरवार्ता)
नविना कमरेड र मेरो बिचमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । पछिल्लो...
काठमाडौं सफा गर्न आछामबाट आएको हुँः केपी खनाल (भिडियोवार्ता)
अध्ययन र रमाइलोमा दिन बिताउने उमेरका एक युवा बिहानदेखि साँझसम्म सडकमा देखिन्छन् । उनको उमेर हाल...
यो सरकार पुर्णरुपमा असफल भईसक्यो: रमेश लेखक (भिडियो अन्तरवार्ता)
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घको १२औं महाधिवेशनको मिति कार्तिक १६ र...
समृद्द दुधौली नगर बनाउने कामको थालनी गरिसकेका छौंः नगर प्रमुख राउत
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब डेढ वर्ष हुन थाल्यो । करिब दुई दशकदेखि कर्मचारीका भरमा चलेको...
दसैँ तिहारमा घर जाने एक जना यात्रुलाई पनि टिकट अभाव हुन दिन्नौ : सरोज सिटौला
बडा दशै मनाउन काठमाडौँबाट विभिन्न स्थान जाने यात्रुको चाप बढ्न सुरु भइसकेको छ । यात्रुको चापलाई...
साना माछालाई सफाइ दिन्छन् भने म ठुला माछा तर्फ जाइलाग्छुः गंगामाया अधिकारी(भिडियोसहित)
गोरखा फुजेलकी गंगामाया अधिकारी आफ्नो छोरा कृष्ण प्रसाद अधिकारीको हत्यारालाई कारबाहीको माग राख्दै अनसन बस्न थालेका...
नेपाली जनताका लागि खाना, नाना र छानासहितको प्रजातन्त्र आवश्यक छः प्रम ओली
सुरेन्द्रबहादुर नेपाली न्यूयोर्क । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनताका लागि मानवतालाई पूर्णता दिने खाना, नाना...
प्रदेशलाई प्रदेश हो भन्ने बुझ्नुपर्छ, ती अलग राष्ट्र होइनन्: प्रधानमन्त्री ओली
संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भई विभिन्न तहको निर्वाचन भइसकेपछि विकास र समृद्धिको लक्ष्यसहित नयाँ सरकार गठन...
May 29, 2018 TV-Annapurna 0